VaMnangagwa Vokurudzirwa Kutaura Zvinogutsa Musangano weUNGA
Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa - New York
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vari kunyora nhoroondo yavo apo vachataura kekutanga semutungamiri wenyika pamusangano weUnited Nations General Assembly, UNGA, uri kuitirwa muNew York.
VaMnangagwa, avo vanozivikanwa nerekuti Ngwena, vachatora mukana uyu kuzvishambadza kuvatungamiri venyika zana nemakumi mapfumbamwe nenhatu dzinova nhengo dzeUnited Nations, vachipa divi ravo rematongerwo enyika rakasiyana nerevaimbove mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, avo vaizivikanwa nekunyomba nyika dzakaita seAmerica neBritain pamusangano weUNGA.
Nyanzvi munyaya dzehupfumi, uye vari chipangamazano musangano reLabour and Economic Development Research Institute, VaProsper Chitambara, vanoti VaMnangagwa vane mukana wekuumba hukama nedzimwe nyika kuburikidza nemashoko avachataura muNew York.
VaChitambara vanoti VaMnangagwa vanofanirwa kugadzirisa nyaya yehupfumi hwenyika izvo zvinoda rubatsiro rwenyika dzekunze.
Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika, uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, VaDewa Mavhinga, vanoti VaMnangagwa vanofanirwa kuratidza nyika dzepasi rose kuti vane gwara rakasiyana neraVaMugabe.
Vanotiwo kunze kwekuvimbisa nyika zhinji pavamire, VaMnangagwa vanofanirwa kuita zvavanenge vavimbisa, kwete kuti vangogumira mukutaura chete.
VaMavhinga vanoti Zimbabwe inoda shamwari dzakawanda, nokudaro VaMnangagwa vanofanirwa kutaura zvinogutsa vatungamiri vose vari muNew York kumusangano weUNGA.
VaMnangagwa vakatarisana nemutoro mukuru wekuti Zimbabwe iumbe hukama hwakanaka nedzimwe nyika, zvikuru dzekumavirira kuitira kuti ikwanisa kuwana rubatsiro rwunozoita kuti nyika ikwanise kubhadhara zvikwereti zvayo.
Pari zvino Zimbabwe ine chikwereti chemabhiriyoni mana emadhora kunyika dziri muParis Club, uye mabhiriyoni maviri emadhora anofanirwa kubhadharwa kuWorld Bank, African Development Bank neEuropean Investment Bank semari yechikwereti yakapfuura nguva yayo yekubhadharwa, kana kuti arreas.
Chikwereti cheZimbabwe chasvika pamabhiriyoni gumi nemasere emadhora.
Asi VaMnangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kugadzirisa hukama hwayo munyaya dzezvikwereti, uye vakapa basa remari kushangwiti, uye ari munhu anoziva nyaya dzemari pasi rose, VaMthuli Ncube.